Global ကွန်ပျူတာသင်တန်း: ကွန်ပျူတာပြဿနာဖြေရှင်းနည်း-၃
ယေဘုယ Problem များအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများ
အဖြစ်အများဆုံးက ပြဿ နာများကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းဟောင်းများဖြင့်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ။ Program များအား ပိတ်ခြင်း၊ ပြန်ဖွင့်ခြင်းများ၊ ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေချင်းကြည့်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်၊ ဒါဟာ ကြီးမားသော ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်၊ ပြဿ နာများကို ဖြေရှင်းလို့ မပြီးနိုင်သေးရင်တောင်၊ အခြားသော ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် စမ်းသတ်ဖြေရှင်းကြည့်ပါ။
Solution 2: If it is plugged into an outlet, make sure it isaworking outlet. To check your outlet, you can plug in another electrical device, such asalamp or cellphone, and see if it receives electricity properly.
Solution 3: If the computer is plugged intoasurge protector, verify that it is turned on. You may have to reset the surge protector by turning it off and then back on. You can also plugalamp or other device into the surge protector to verify that it is on.
မီးခလုတ်ကို မဖွင့်ထားဘူးဆိုရင် ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်လို့မရနိုင်ပါဘူး
ဖြေရှင်းနည်း -၁ အကယ်လို့ ကွန်ပျူတာ ဖွင့်မရဘူးဆိုရင် မီးခလုတ်ကို အရင်ဦးဆုံး စတင်စစ်ဆေးပေးပါ၊ စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးပါက ကွန်ပျူတာနောက်ဘက် ချိတ်ဆက်နေရာကို သွားပြီစစ်ဆေးပေးပါ။
ဖြေရှင်းနည်း -၂ မီးကြိုးတပ်ဆင်ထားမှု စစ်ဆေးပြီးသွားရင်၊ မီး ပလက်ခုံများ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို ထပ်စစ်ဆေးပေးပါ၊ အခြား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ပြီး ဖွင့်ကြည့်ပါ၊ ဥပမာ။ မီးအားသွင်း ဓါတ်မီးမျာ၊ ဖုန်းများနျှင့် လျှပ်စစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်ပါ။
ဖြေရှင်နည်း -၃ ကွန်ပျူတာ စနစ်တတ်ဆင်ရာတွင် မီးအားကို လုံခြုံစေသော Safe Guard မှ တဆင့်သုံးပါ၊ ၄င်း ကို သေချာစွာတပ်ဆင်ထားပြီးလျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ဖြေရှင်းနည်း -၄ သင်ဟာ Laptop ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသုံးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ဘက်ထရီ အားမသွင်းထားမိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ Ac Adapter ကို မီးပလက်မှာ တပ်ဆင်လိုက်ပါ၊ ချက်ချင်းဖွင့်လို့မရသေးရင် စက်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်သော ဘက်ထရီပမာဏ တက်လာသည်အထိ ခဏစောင့်ပြီး ဖွင့်ကြည့်ပါ။
ပြသနာ Program များ ဖွင့်ရာတွင် နှေးကွေးနေခြင်း။
ဖြေရှင်းနည်း -၁ ၄င်းProgram အား ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။
ဖြေရှင်းနည်း-၂ Program အား Update ပြုလုပ်ပါ၊ ဒီအဆင့်တွေ လုပ်ကြည့်ပါ၊ Help menu မှ Option မှ Check for Update ကို နှိပ်ပြီး Update ပြုလုပ်ပါ။ ရှာမတွေ့ရင် ၄င်း Program နောက်ထွက် Version ကို ယူသုံးကြည့်ပါ။
တခါတရံမှာ application များ ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း ၄င်းအား ခေတ္တသေဆုံးခြင်း ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ သင့်အနေဖြင့် Window ကို ပိတ်ဖို့လိုအပ်လာပါလိမ့်မည် application မှ Close ခလုပ်ဖြင့် ပိတ်ကြည့်ပါ။
ဖြေရှင်းနည်း -၁ ။ Application အား မရ ရအောင် ပိတ်ကြည့်နည်း။ Keyboard မှ Ctrl+Alt+Delete တွဲပြီး နှိပ်ကြည့်ပါ။ ဒါဟာ Task Manager ကို ခေါ်တာပါဘဲ။ Mac သုံးနေတဲ့သူဆိုရင်။ Command+Option+Esc ကိုနှိပ်ပြီး ခေါ်ပါ။ ဒီကနေပြီး အလုပ်မလုပ်တော့တဲ application ကို ရွေးပြီး End task ကိုရွေးပါ။ Mac ဆိုရင် Force Quit ကို ရွေးပြီး သေနေသော application ကို ပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း -၂ ။ ကွန်ပျူတာကို Restart ပြုလုပ်ပါ။ ပိတ်လို့ ဘယ်လိုမှ မရတဲ့အခါ Restart ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Solution 1: Run your virus scanner. You may have malware running in the background that is slowing things down.
Solution 3: If you're usingaPC, you can run Disk Defragmenter (called Optimize Drives in Windows 8). Doing so will make sure all pieces of each file or program are stored close together in your computer, so the computer will be able to access them more quickly. In most versions of Windows, the Disk Defragmenter can be found in the Start menu. In Windows 8, you can find it by typing defragment from the Start screen.
Program များအားလုံး ဘာကြောင့် နှေးကွေးနေရတာလဲ
ဖြေရှင်းနည်း -၁။ ကွန်ပျူတာကို Virus စစ်ကြည့်ပါ။ ကွန်ပျူတာ နောက်ခံတွင် Malware များ စွာ အလုပ် လုပ်နေသောကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း -၂။ နောက်တချက်က ကွန်ပျူတာမှာ Hard Drive နေရာလွတ်မရှိတော့လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေရာလွတ်ပိုရရှိစေဖို့ မလိုအပ်တော့တဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖျက်ထုတ်ပေးပါ။ နောက်ဖြစ်နိုင်တာက Hard disc ပျက်နေလို့ရှိရင်လည်း နှေးကွေးလာပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်း -၃ ။ နောက်ပြီး Disk Defragmenter ခေါ်ပြီး တူရာဖိုင်များကို တစ်စုတစည်းတည့်ဖြစ်အောင် ဖိုင်စီပေးပါ။ ဖိုင်တစ်ခုစ အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ (သို့) ပရိုဂရမ်များဟာ တနေရာတည်းမှာ ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ မဟုတ်ရင်တော့ နေရာစုံမှာ ရောက်နေတဲ့ဖိုင်တွေကို လိုက်ပြီးစုပေးရမယ် ခိုင်းသမျှလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာ Respond time က ပိုကြာရတာပေါ့။
Posted by Zayyar Ting at 3:38 AM
ဓါတ်ပုံပြင်ခြင်းအတွက်အရေးပါသော Tools များနှင့် အခြ...
ဓါတ်ပုံပြင်သော Program ၏ ယူနစ်များသတ်မှတ်ချက်များေ...
ဓါတ်ပုံ Layer များအကြောင်း
ဓါတ်ပုံ Layer အခြေခံ-၂
ဓါတ်ပုံ Layers များ ပြုပြင်ခြင်း-၄
ဓါတ်ပုံပြင်ခြင်း Levels, Curves and Color-1
ဓါတ်ပုံပြင်ခြင်း Levels adjustmest tips
ဓါတ်ပုံပြင်ခြင်း Auto-adjustment tools
ဓါတ်ပုံပြင်ခြင်း Sharpening and Noise Reduction
ဓါတ်ပုံပြင်နည်း Sharpening tips-2
ဓါတ်ပုံပြင်နည်း Noise reduction